Suu – ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥရောပနဲ့ ဗြိတိန်အခမ်းအနားမိန့်ခွန်းများ ပြည်တွင်းရုပ်သံမှ ထုတ်လွှင့် | MoeMaKa Burmese News & Media
Suu – ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥရောပနဲ့ ဗြိတိန်အခမ်းအနားမိန့်ခွန်းများ ပြည်တွင်းရုပ်သံမှ ထုတ်လွှင့်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥရောပနဲ့ ဗြိတိန်အခမ်းအနားမိန့်ခွန်းများ ပြည်တွင်းရုပ်သံမှ ထုတ်လွှင့်
မိုးမခအထောက်တော် (သာဓုကန်)၊ ဇွန် ၂၂၊ ၂၀၁၂
ဇွန်လဒုတိယပတ် ဥရောပနဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံများက အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အာဏာပိုင်များနဲ့ မိတ်ဆွေများက ဖိတ်ကြားလို့ ပြည်ပခရီးစဉ်အဖြစ် ထွက်လာတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ သြစလိုမြို့ အခမ်းအနားနဲ့ ဘွဲ့တံဆိပ် ပေးတဲ့အခမ်းအနားများက မိန့်ခွန်းပြောကြားချက်တွေကို မြန်မာပြည်တွင်းက Skynet နဲ့ MRTV4 ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များက ထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အဲသည်လို လွှင့်ပေးခဲ့ပေမယ့် ဥရောပခရီးစဉ်ရောက် နိုင်ငံတော်အစုိုးရ၀န်ထမ်း ဦးရဲထွဋ် ဆိုသူကတော့ ကိုဘင်ဟေဂင် စာနယ်ဇင်းဆွေးနွေးပွဲမှာ နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေက ဒေါ်စုခရီးစဉ်ကို မထုတ်လွှင့်တာက သူဟာ နိုင်ငံကိုယ်စားပြု ခရီးသွားတာ မဟုတ်လို့ ဆိုပြီး မီဒီယာမေးခွန်းများကို ဖြေကြားလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်တွင်းနဲ့ ပြည်ပက မြန်မာလူထုတရပ်လုံးကတော့ အင်န်အယ်ဒီပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်၊ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဥရောပနဲ့ ဗြိတိန်က တခမ်းတနား ကြိုဆိုကြတာ၊ ဂုဏ်ပြု ဧည့်ခံကြတာ၊ တလေးတစား နေရာပေး ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ကြတာတွေကို ပြင်ပမီဒီယာနဲ့ ပြည်တွင်း ဂျာနယ်တွေကတဆင့် ကြည့်ရှုရလို့ ၀မ်းမြောက် ၀မ်းသာ နှစ်ထောင်း အားရ ဂုဏ်ယူ ပျော်ရွှင်ကြတယ်လို့ ပြောဆိုကြပါတယ်။
ဒေါ်စုရဲ့ တသမတ်တည်းသော နိုင်ငံရေး သဘောထားများနဲ့ ပြောဆိုဆွေးနွေးချက်များကို ယခု သီတင်း၂ပတ်အတွင်းမှာ နိုင်ငံတကာမီဒီယာက အပြည့်အစုံဖော်ပြကြတာ၊ တင်ဆက်ကြတာတွေကို ရှုစားပြီး ဒေါ်စုရဲ့ နိုင်ငံရေး အခန်းကဏ္ဍကို သိသာထင်ရှားလာစေတယ်လို့ ပြည်တွင်းက အယ်ဒီတာတဦးက မိုးမခကို သဘောထားပြောပါတယ်။
“မီဒီယာ Coverage ဆိုတာ ပြည်ပမှာ ဘယ်လောက်ရှိတယ်။ ဘယ်လောက် အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာ ၃၆၀ ဒီဂရီ ဘက်စုံက လှည့်ပြသလိုမျိူး လုပ်ပြနိုင်တာကို တွေ့ကြရတယ်။ ကျနော်တို့ မီဒီယာတွေအတွက် သင်ခန်းစာယူစရာ ဖြစ်တယ်။ သတင်းကို ပြတာပဲ။ သတင်းလိုက်နေတဲ့သူတွေ သတင်းထောက်တွေကို ပြနေတာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါကို သဘောပေါက်မိတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ အတားအဆီးမရှိမှု၊ ဒိုးယိုပေါက် တင်ဆက်နိုင်မှုတွေကို ကြည့်မိတော့ သူတို့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘယ်လောက်တောင် လေးစားတယ်၊ နေရာပေးတယ်၊ ဂုဏ်ယူတယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။ စီစဉ်သူတွေဘက်ကလည်း ဘယ်လောက် အတွေ့အကြုံရှိတယ်။ ပြင်ဆင်ထားနိုင်တယ်။ လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။”
“ဘာလုပ်သလဲ သိလား။ တီဗီထဲက အမေစုနဲ့ တွဲပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတယ်။ ပုံတွေ အများကြီးပဲ။ ပါလီမန်တွေ၊ အခမ်းအနားတွေမှာ အမေစုကို မြင်ရတာ အရမ်း ကျေနပ်မိတယ်။ အဲသည် တီဗီစကရင်ကြီးနဲ့ တွဲပြီး ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ထားတယ်”
လို့ အထက်တန်းကျောင်းသူတဦးက မိုးမခကို သူရဲ့ တုန့်ပြန်ချက်ကို ပြောပါတယ်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ယူရို ဘောလုံးပွဲ တပွဲတော့ ကြည့်လာခဲ့ဖို့ ပြောပေးပါ”
လို့ ဘောလုံးပွဲ ၀ါသနာရှင်လူငယ်တဖွဲ့က သူတို့ သဘောထားကို ပြောပါတယ်။
4 Responses to Suu – ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥရောပနဲ့ ဗြိတိန်အခမ်းအနားမိန့်ခွန်းများ ပြည်တွင်းရုပ်သံမှ ထုတ်လွှင့်
U Thaung on June 22, 2012 at 1:10 pm
Dear readers: It is so obvious to see how intelligent she is through her different speeches at different occasions. There is only one Nobel prize winner from our country and only one honourary doctorate degree holder from Oxford [it is totally different from Zay-Ga-Bar U Khin Shwe’s PhD, they are like chalk and cheese], how wonderful she is. Her language ability, choice of words, stories & poems in her speeches, accent etc are so appropriate and beautiful and these qualities are something we should all be proud of. Some people might think that she hadaBritish husband and her English should be good. It is just one key factor, she has been out of English speaking community for the last 24 years or so, but her English is still marvelous. Her knowledge is at the peak and her reading power is unique. We have seen many Burmese who have foreigner spouses and have been living in foreign countries for many decades, many PhD holders from English speaking countries, but how do they speak the foreign language? Think about it! This is the quality she has got and she is totally gifted. She is not just eloquent, her way of thinking and analysing matters are excellent. In fact, she is so philosophical and her level of thinking and viewing life is very much higher than many millions I have encountered in my life. She should be regarded asaBurmese philosopher of this century!!
U AYE on June 23, 2012 at 1:20 am
We agree your comments. Ruling party and top brasses should appreciate it.
Buffalos* on June 23, 2012 at 9:57 am
For Ruling party and top brasses , like ” playing violin/guitar near Buffalos “…… just what they need is only grass…
Lay Khine on June 24, 2012 at 3:21 pm
I am so proud to beaBurmese citizen.Now, people the world over, need not ask where Burma is and scratch their heads if we mention we are from Burma.It is due to Daw Aung San Suu Kyi that we can now proudly lift our heads and say we are BURMESE.She is so educated,eloquent,dainty,elegant,brave,good-hearted and intellegent. Her ability to speak different languages very fluently is awesome.We, the people of BURMA ,will always be behind her.
Why won’t those brainless, money loving asses see that they are nothing compared to “The Lady” They should hold hands with her and do good for the country.Do they really love the country? Just because they held guns for some time in the past, this doesn’t mean they love the country.Were they really infront when battling with the enemy? I doubt it.They must be hiding somewhere.Go to hell –you asses!!!
Long Live Daw Aung San Suu Kyi!!!!
Go on,do the good work you are doing. We are all for you.